राणा र केसीको लज्जास्पद “न्याय” सम्पादन :: NepalPlus
जाहेर छ, यो फैसलामा न्यायको घाँटी ङ्याकिएको छ । रामशाह पथमा दिउँसै रातलाई ओरालिएको छ र नेपालमा न्यायको सम्पूर्णत: हत्या भइसकेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिएको छ ।
राणा र केसीले न्यायप्रणालीको स्वच्छताको धज्जी उडाइदिएका छन् । हुन त यी राणाजीले विशेष अदालतको न्यायाधीश भएर “न्याय” सम्पादन गरेका बेलामा पनि ठूल्ठूला भ्रष्टाचारीहरूले राहतको सास फेर्न पाएका थिए । राणाका सहन्यायसम्पादक केसी पनि “न्याय उपभोक्ताहरू” का बीच प्रिय नै छन् क्या रे !
अब के हुन्छ ? यस प्रश्नको उत्तर दिनसक्ने अवस्थामा म छैन । बार एसोसियसनका कालाकोटेहरू के भन्छन् कुन्नि ? न्यायमूर्तिहरूबाटै भएको यस अन्यायलाई लिएर संसदरूपी फिलिबस्टर्स क्लबका मेम्बरहरूमध्ये पनि विशाल भट्टराई एक जना बाहेक सब चुप छन् । कानूनको राज्यका लागि बोल्छौँ लड्छौँ भनेर दुनियाँका अगाडी कहतारो थापी थापी ज्यान बनाइरहेका अधिकारकर्मीहरू कता लुकेका छन् कुन्नि, अत्तोपत्तो छैन । मेरा सहपाठी मित्र पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई यस अघि सामाजिक सरोकारका कुनै कुनै विषयलाई लिएर बोलेको सुनेको थिएँ अहिले त साथी पनि चुप लागेका छन् । यस भन्दा पहिले अनेक मामिलाहरूलाई लिएर महाक्रान्तिकारिणीको मुद्रामा प्रस्तुत हुँदै आएकी अर्की पूर्व प्रन्या सुशीला कार्की म्याडमको पनि यस विषयमा कुनै चाल्चुल सुनिएको छैन । यस्तो स्थितिमा म कसरी भनौँ अब के हुन्छ ?